Ndị Jehova ‘Na-ajụ Ajọ Omume’
Ha Ji Obi Ha Wepụta Onwe Ha—Na Maịkronishia
“Jehova Maara Ndị Bụ́ Ndị Ya”
Papa M Nwụrụ, Mụ Enweta Papa Ọzọ
“Unu Bụ Ndị Àmà M”
‘Unu Ga-abụ Ndị Àmà M’
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) JULAỊ 2014
“Ka onye ọ bụla nke na-akpọ aha Jehova jụ ajọ omume.”—2 TIM. 2:19.
Olee ihe ndị nwere ike ime ka udo ghara ịdị n’ọgbakọ? Olee otú anyị nwere ike isi gbaara ha ọsọ?
A bịa n’ihe gbasara ụdị ndị anyị na ha ga na-akpa, olee otú anyị ga-esi “jụ ajọ omume”?
Olee otú anyị ga-esi gosi na anyị anaghị eme anya ụra n’ihe gbasara ‘ịjụ ajọ omume’?
1. Olee ihe anyị na-anaghị eji egwu egwu?
N’ỌTỤTỤ ebe, a na-ede aha Jehova n’ahụ́ ụlọ ma ọ bụ n’ihe ndị dị n’ebe a na-edebe ihe ndị mgbe ochie. Ọ bụrụ na ị hụtụla aha Jehova n’ụdị ebe ahụ, o doro anya na o mere ka obi dị gị ezigbo ụtọ. A sị ka e kwuwe, anyị bụ́ Ndịàmà Jehova anaghị eji aha Chineke egwu egwu. N’ụwa niile, e nweghị ndị e ji aha Jehova mara otú e si jiri ya mara anyị. Ma, ọ bụghị ebe ahụ ka okwu biri. Ebe anyị bụ Ndịàmà Jehova, anyị kwesịrị ịna-akpa àgwà ga-eme ka ndị mmadụ na-akwanyere Jehova ùgwù.
2. Ebe anyị na-aza Ndịàmà Jehova, olee ihe anyị kwesịrị ịna-eme?
2 Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị na Jehova dịrị ná mma, ihe anyị ga-eme abụghị naanị ịna-akpọ aha ya. Anyị ga na-erubere iwu ya isi. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji gwa ndị Jehova ka ha ‘si n’ihe ọjọọ wezụga onwe ha.’ (Ọma 34:14) Pọl onyeozi mere ka o doo anya mgbe o dere, sị: “Ka onye ọ bụla nke na-akpọ aha Jehova jụ ajọ omume.” (Gụọ 2 Timoti 2:19.) Ebe anyị bụ Ndịàmà Jehova, ndị mmadụ ma na anyị na-akpọ aha ya. Ma, olee otú anyị ga-esi jụ ajọ omume?
GBAARA IHE ỌJỌỌ ỌSỌ
3, 4. Olee ihe Pọl kwuru nke siiri ụfọdụ ndị ike ịghọta? Gịnị kpatara ya?
3 Ka anyị leba anya n’ihe Pọl kwuru na 2 Timoti 2:19. O kwuru gbasara “ntọala siri ike nke Chineke,” nke e dere ihe abụọ na ya. Ihe nke mbụ e dere na ya bụ, “Jehova maara ndị bụ́ ndị ya.” O doro anya na Pọl si n’Ọnụ Ọgụgụ 16:5 nweta ya. (Gụọ isiokwu bu nke a ụzọ.) Nke abụọ abụrụ, “Ka onye ọ bụla nke na-akpọ aha Jehova jụ ajọ omume.” O siiri ụfọdụ ndị ike ịghọta ihe a Pọl kwuru. Gịnị kpatara ya?
4 Otú Pọl si kwuo ihe ahụ o kwuru gosiri na o si ebe ọzọ nweta ya. Ma, ọ dị ka e nweghị amaokwu ọ bụla kwuru otu ihe ahụ n’Akwụkwọ Nsọ Hibru. N’ihi ya, mgbe Pọl onyeozi sịrị: “Ka onye ọ bụla nke na-akpọ aha Jehova jụ ajọ omume,” gịnị ka ọ na-ekwu gbasara ya? Tupu ya ekwuo ihe a, o kwuru ihe dị n’Ọnụ Ọgụgụ isi iri na isii, bụ́ ebe kọrọ otú Kora si nupụrụ Chineke isi. Ọ̀ ga-abụ na ihe nke abụọ ahụ o kwuru gbasakwara ihe ahụ merenụ?
5-7. Olee ihe mere n’oge Mozis nke Pọl kwuru gbasara ya na 2 Timoti 2:19? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.)
5 Baịbụl kwuru na Detan na Abaịram, bụ́ ụmụ Elayab, so Kora bụrụ isi sekpụ ntị n’inupụrụ Mozis na Erọn isi. (Ọnụ Ọgụ. 16:1-5) Ha kparịrị Mozis. Ha ekweghị erubere ya isi n’agbanyeghị na ọ bụ ya ka Chineke họpụtara ka ọ na-edu ha. Ebe ọ bụ na ha na ndị Izrel ndị ọzọ ka bi, ha nwere ike ime ka ndị ọzọ soro ha kpawa àgwà ọjọọ a ha na-akpa. Tupu Jehova emee ka a mata ndị ji obi ha niile na-efe ya, o nyere otu iwu doro anya.
6 Baịbụl kwuru, sị: “Jehova wee sị Mozis: ‘Gwa nzukọ ahụ, sị: “Sinụ na gburugburu ụlọikwuu Kora, Detan na Abaịram pụọ!”’ E mesịa, Mozis biliri gakwuru Detan na Abaịram, ndị okenye Izrel sokwa ya gaa. O wee gwa nzukọ ahụ, sị: ‘Biko, sinụ n’ihu ụlọikwuu ndị ajọ omume a pụọ, unu emetụkwala ihe ọ bụla bụ́ nke ha aka, ka e wee ghara ikpochapụ unu n’ihi mmehie ha niile.’ Ha wee si n’ihu ụlọikwuu Kora, Detan na Abaịram pụọ ozugbo.” (Ọnụ Ọgụ. 16:23-27) Jehova gbuziri ndị nnupụisi ahụ niile. Ma, o gbughị ndị rubeere ya isi. Ọ̀ bụ maka gịnị? Ọ bụ maka na ha si n’ebe ndị nnupụisi ahụ nọ pụọ, si otú ahụ gosi na ha ‘jụrụ ajọ omume.’
7 Jehova na-enyocha obi. Ọ na-ahụ otú ndị ohu ya si eji obi ha niile na-ejere ya ozi. Ma, n’oge Mozis, ndị na-erubere Chineke isi kwesịrị ime ihe ozugbo ma si n’ebe ndị ajọ omume nọ pụọ. N’ihi ya, mgbe Pọl dere, sị: “Ka onye ọ bụla nke na-akpọ aha Jehova jụ ajọ omume,” o nwere ike ịbụ na ọ na-ekwu gbasara ihe ahụ e kwuru n’Ọnụ Ọgụgụ 16:5, 23-27. Ihe anyị kwuru dabara adaba ebe ọ bụ na Pọl kwuru, sị: “Jehova maara ndị bụ́ ndị ya.”—2 Tim. 2:19.
“JỤ AJỤJỤ NZUZU NA NKE NA-ENWEGHỊ ISI”
8. Gịnị mere na ihe anyị kwesịrị ime abụghị naanị ịna-akpọ aha Jehova ma ọ bụ ịnọ n’ọgbakọ?
8 Ihe mere Pọl ji gwa Timoti gbasara ihe mere n’oge Mozis bụ ka o chetara Timoti na o kwesịrị ịgba mbọ ka ihe ọ bụla ghara ime ka ya na Jehova ghara ịdị ná mma. N’oge Mozis, ihe ndị na-erubere Chineke isi kwesịrị ime abụghị naanị ịna-akpọ aha Jehova. Otú ahụ ka ọ dịkwa Ndị Kraịst. Ihe ha kwesịrị ime abụghị naanị ịnọ n’ọgbakọ. Ndị ji obi ha niile na-efe Jehova kwesịrị ịjụ ajọ omume. Olee otú Timoti si mee ihe a Pọl kwuru? Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n’ihe ahụ Pọl gwara Timoti?
9. Olee nsogbu “ajụjụ nzuzu na nke na-enweghị isi” kpatara n’ọgbakọ Ndị Kraịst n’oge ndịozi?
9 Baịbụl kwuru ihe ụfọdụ na-adịghị mma Ndị Kraịst kwesịrị ịjụ. Dị ka ihe atụ, tupu Pọl agwa Timoti ihe ahụ e kwuru na 2 Timoti 2:19, ọ gwara ya ka ọ “ghara ịlụ ọgụ banyere okwu” nakwa ka o “zere okwu nzuzu.” (Gụọ 2 Timoti 2:14, 16, 23.) Ụfọdụ ndị nọ n’ọgbakọ nọ na-akụzi ozizi ụgha. Ọ dịkwa ka è nwere ndị nọ na-ekwu ihe ndị nwere ike ịkpata esemokwu. Ụdị ihe ahụ ha na-ekwu na-akpata arụmụka na obi abụghị otu. Ọ bụrụgodị na o megideghị ihe Baịbụl kwuru, o nwere ike ịkpata nkewa n’ọgbakọ. Ọ bụ ya mere Pọl ji gwasie Timoti ike ka ọ “jụ ajụjụ nzuzu na nke na-enweghị isi.”
10. Gịnị ka anyị kwesịrị ime gbasara ihe ndị si n’ezi ofufe dapụ na-akụzi?
10 Taa, a naghị ahụkarị ndị na-ezi ozizi ụgha n’ọgbakọ. Ma, ọ bụrụ na anyị ahụ ebe a na-akụzi ozizi ụgha, anyị kwesịrị ịjụ ya ozugbo, onye ọ sọkwara ya bụrụ ya na-akụzi ya. Anyị na ndị si n’ezi ofufe dapụ ekwesịghị ịrụwa ụka ma ọ̀ bụ ihu na ihu ma ọ bụ n’Ịntanet ma ọ bụ n’ihe ọzọ e ji ezirịta ozi. Ọ bụrụgodị na anyị bu n’obi inyere ụdị ndị ahụ aka, anyị na ha ịrụwa ụka pụtara na anyị anaghị eme ihe ahụ Baịbụl gwara anyị ka anyị mee. Jehova nyere anyị iwu ka anyị jụ ndị si n’ezi ofufe dapụ, ya bụ, ka anyị zere ha kpamkpam.
Gị na ndị si n’ezi ofufe dapụ ekwesịghị ịrụwa ụka (A ga-akọwa ya na paragraf nke 10)
11. Olee ihe nwere ike ime ka udo ghara ịdị n’ọgbakọ? Olee otú ndị okenye nwere ike isi ghọọrọ ndị ọzọ ezigbo ihe nlereanya?
11 E nwere ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka udo ghara ịdị n’ọgbakọ ma e wezụga ịkụzi ozizi ụgha. Dị ka ihe atụ, ebe ọ bụ na e nwere ụdị ntụrụndụ dị iche iche, nke dị otu onye mma nwere ike ọ gaghị adị onye ọzọ mma. Ụdị ihe ahụ nwere ike ime ka a rụwa ụka ma ọ bụ jụwa “ajụjụ nzuzu na nke na-enweghị isi.” Ọ bụrụ na nwanna na-akwado ụdị ntụrụndụ Chineke kwuru na ọ dịghị mma, ndị okenye ekwesịghị ịgbachi ya nkịtị maka na ha achọghị ka ha na ya sewe okwu. (Ọma 11:5; Efe. 5:3-5) Ma, ha kwesịrị ilezi anya ka ha ghara ịna-akụziri ụmụnna ihe ha chere. Kama, ha kwesịrị ịna-eme ihe Baịbụl gwara ha, ya bụ: “Na-azụnụ ìgwè atụrụ Chineke nke unu na-elekọta, . . . ọ bụghịkwa ime ndị bụ́ ihe nketa nke Chineke dị ka ọ̀ bụ unu nwe ha, kama ghọọrọnụ ìgwè atụrụ ahụ ihe nlereanya.”—1 Pita 5:2, 3; gụọ 2 Ndị Kọrịnt 1:24.
12, 13. (a) Olee otú Ndịàmà Jehova si ekpebi ihe ha ga-eji na-atụrụ ndụ? Olee ihe Baịbụl kwuru na-enyere ha aka? (b) Olee otú ihe e kwuru n’amaokwu Baịbụl ndị a tụlere na paragraf nke iri na abụọ si gbasa ihe dị iche iche anyị na-eme?
12 N’ihe gbasara ntụrụndụ, nzukọ Jehova anaghị atụle ụdị fim dị iche iche, egwuregwu vidio, akwụkwọ ma ọ bụ egwú ma kpebiere anyị ndị nke anyị kwesịrị izere. N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na Baịbụl gwara onye ọ bụla ka ọ zụọ ‘ikike nghọta ya ka o nwee ike ịmata ihe dị iche n’ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi.’ (Hib. 5:14) Akwụkwọ Nsọ kwuru ihe ndị nwere ike inyere Onye Kraịst aka mgbe ọ na-ekpebi ụdị ihe ọ ga-eji atụrụ ndụ. N’ihe ọ bụla anyị na-eme, anyị kwesịrị ‘ịna-achọpụta ihe dị Onyenwe anyị mma.’ (Efe. 5:10) Baịbụl kwukwara na e nwere ikike Chineke nyere ndị isi ezinụlọ. N’ihi ya, ha nwere ike ikpebi ụdị ihe e ji atụrụ ndụ ha na-achọghị ka e webata n’ụlọ ha.—1 Kọr. 11:3; Efe. 6:1-4.
13 Ihe ndị e kwuru n’amaokwu Baịbụl ndị ahụ agbasaghị naanị ụdị ihe ndị anyị ji atụrụ ndụ. Ihe gbasara uwe na ejiji, ahụ́ ike, ụdị nri mmadụ kwesịrị iri, na ihe ndị ọzọ nwekwara ike ime ka ụmụnna rụwa ụka. N’ihi ya, ọ bụrụ na ihe nwanna chọrọ ime emegideghị ihe Baịbụl kwuru, ndị Jehova ekwesịghị ikwo ya sewe okwu n’ihi na “ohu nke Onyenwe anyị ekwesịghị ịlụ ọgụ, kama o kwesịrị ịbụ onye na-emeso mmadụ niile n’ụzọ dị nwayọọ.”—2 Tim. 2:24.
GỊ NA NDỊ ỌJỌỌ AKPALA
14. Olee ihe atụ Pọl ji gosi na anyị kwesịrị izere ndị na-akpa àgwà ọjọọ?
14 Olee ụzọ ọzọ ndị na-akpọ aha Jehova nwere ike isi “jụ ajọ omume”? Ọ bụ izere ndị na-akpa àgwà ọjọọ. Anyị kwesịrị iburu n’uche na mgbe Pọl mechara ihe atụ gbasara “ntọala siri ike nke Chineke,” o mere ihe atụ ọzọ. O dere gbasara “ụlọ buru ibu” nke nwere “arịa dị iche iche, ọ bụghị naanị nke ọlaedo na ọlaọcha kamakwa nke osisi na nke ụrọ, ụfọdụ bụkwa maka nzube kwesịrị nsọpụrụ ma ndị ọzọ bụ maka nzube nsọpụrụ na-adịghị na ya.” (2 Tim. 2:20, 21) Ọ gwaziri Ndị Kraịst ka ha ‘zere’ arịa ndị nke ahụ na-abaghị uru.
15, 16. Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n’ihe atụ ahụ Pọl mere gbasara “ụlọ buru ibu”?
15 Gịnị ka ihe atụ a Pọl mere pụtara? Pọl ji ọgbakọ Ndị Kraịst tụnyere “ụlọ buru ibu,” jirikwa ndị nọ n’ọgbakọ tụnyere “arịa” ndị dị n’ụlọ ahụ. Ọ bụrụ na ihe ụfọdụ e ji esi nri adịghị ọcha ma ọ bụkwanụ ruo unyi, o nwere ike ịkpata ọrịa. Onye nwe ụlọ agaghị edowe ha n’ebe ọ na-edowe ndị nke dị ọcha.
16 Ọ bụ otú ahụ ka ọ dị ndị ohu Jehova taa. Ọ bụrụ na anyị achọghị ka ihe ọ bụla mee ka anyị ghara ịdị ọcha, anyị na ndị na-anaghị erubere Jehova isi n’ọgbakọ ekwesịghị ịna-akpa. (Gụọ 1 Ndị Kọrịnt 15:33.) Ọ bụrụ na e nwere ndị nọ n’ọgbakọ anyị na ha na-ekwesịghị ịkpa, o doro anya na anyị na ndị ụwa ekwesịghị ịkpachi anya. Ọtụtụ n’ime ha bụ ‘ndị hụrụ ego n’anya, ndị na-enupụrụ ndị mụrụ ha isi, ndị na-adịghị eguzosi ike n’ihe, ndị nkwutọ, ndị na-eme ihe ike, ndị na-adịghị ahụ ezi ihe n’anya, ndị na-arara mmadụ nye, na ndị hụrụ ihe ụtọ n’anya kama ịbụ ndị hụrụ Chineke n’anya.’—2 Tim. 3:1-5.
JEHOVA NA-AGỌZI NDỊ NA-ERUBERE YA ISI
17. Olee otú ụmụ Izrel si gosi na ha ji obi ha niile “jụ ajọ omume”?
17 Mgbe Jehova nyere ụmụ Izrel iwu ka ha ‘si na gburugburu ụlọikwuu Kora, Detan na Abaịram pụọ,’ ndị na-erubere ya isi ‘pụrụ ozugbo.’ (Ọnụ Ọgụ. 16:24, 27) Ha emeghị anya ụra ma ọ bụkwanụ gbuwe oge. Ọpụpụ ahụ ha pụrụ ozugbo gosiri na ha ji obi ha niile rubere Jehova isi. Ha achọghị ime ihe ọ bụla nwere ike ịkpasu Jehova iwe. Otú ha si rubere Jehova isi gosiri na o meghị ha obi abụọ. Ha mere ka o doo anya na ha na-akwado Jehova ma jụ ajọ omume. Gịnị ka ihe a na-akụziri anyị? 18. Gịnị mere Pọl ji gwa Timoti ka ọ “gbaara ọchịchọ a na-enwe n’oge ntorobịa ọsọ”?
18 Anyị anaghị eji adịm ná mma anyị na Jehova egwu egwu. E nwee ihe ọ bụla nwere ike ime ka anyị na ya ghara ịdị ná mma, anyị ekwesịghị ịgbachi nkịtị. Anyị kwesịrị ịjụ ya ozugbo. Ọ bụ ya mere Pọl ji gwa Timoti ka ọ “gbaara ọchịchọ a na-enwe n’oge ntorobịa ọsọ.” (2 Tim. 2:22) N’oge ahụ, Timoti abụghị obere nwa. O nwere ike ịbụ na ọ karịala afọ iri atọ. Ma, ọ bụghị naanị ndị na-eto eto na-enwe ‘ọchịchọ ọjọọ a na-enwe n’oge ntorobịa.’ Mgbe ọ bụla ụdị ọchịchọ ahụ batara Timoti n’obi, o kwesịrị ‘ịgbara ya ọsọ,’ ya bụ na o kwesịrị ‘ịjụ ajọ omume.’ Jizọs kwuru ụdị ihe ahụ mgbe ọ sịrị: ‘Ọ bụrụ na anya gị na-eme ka ị sụọ ngọngọ, ghụpụ ya ma tụfuo ya.’ (Mat. 18:9) Taa, ọ bụrụ na Onye Kraịst chọrọ ime ihe a Jizọs kwuru, ọ gaghị agba nkịtị ma ọ hụ ihe nwere ike ime ka ya na Jehova ghara ịdị ná mma. O kwesịrị ịjụ ihe ahụ ozugbo. O kwesịghị imewe anya ụra ma ọ bụkwanụ gbuwe oge.
19. Olee otú ụfọdụ ndị si gosi na ha achọghị ka ihe ọ bụla mee ka ha na Jehova ghara ịdị ná mma?
19 E nwere ụfọdụ ndị na-aṅụ oké mmanya tupu ha aghọọ Ndịàmà Jehova. Ma, ha ekpebiela na ha agaghịzi na-aṅụ mmanya. E nwekwara ndị nweburu àgwà ọjọọ ha na ya na-alụ. Ma ugbu a, ha hụ ihe e ji atụrụ ntụrụndụ nke nwere ike ime ka ụdị ihe ahụ gụwa ha agụụ, ha agbaara ya ọsọ ọ bụrụgodị na ihe ahụ adịghị njọ. (Ọma 101:3) Dị ka ihe atụ, tupu otu nwoke aghọọ Onyeàmà Jehova, ọ na-esokarị ndị na-eme omume rụrụ arụ aga agba egwú. Ma, mgbe ọ mụtara eziokwu Baịbụl, o kpebiri na ya agaghịzi na-agba egwú ọ bụrụgodị na ọ gara n’ebe Ndịàmà Jehova na-enwe oriri. Ọ chọghị ihe ọ bụla ga-eme ka o cheta omume rụrụ arụ ọ na-emebu. Ma, ọ pụtaghị na Onye Kraịst ekwesịghị ịṅụ mmanya, ịgba egwú, ma ọ bụ ime ihe ọ bụla ọzọ na-adịghị njọ. Ma, anyị niile kwesịrị ilezi anya ka anyị ghara ime ihe ọ bụla ga-eme ka anyị na Jehova ghara ịdị ná mma.
20. N’agbanyeghị na ‘ịjụ ajọ omume’ adịghị mfe, gịnị mere obi ji sie anyị ike na anyị ga-emeli ya?
20 Ndịàmà Jehova anyị na-aza bụ ihe ùgwù. Ma, e nwere ọrụ ya na ya so. Anyị kwesịrị ‘ịjụ ajọ omume’ ma ‘si n’ihe ọjọọ wezụga onwe anyị.’ (Ọma 34:14) Ọ bụghị mgbe niile ka ime otú ahụ na-adị mfe. Ma, obi ga-esi anyị ike ma anyị cheta na o nweghị mgbe Jehova na-agaghị ahụ “ndị bụ́ ndị ya” n’anya, ya bụ, ndị na-erubere ya isi.—2 Tim. 2:19; gụọ 2 Ihe E Mere 16:9a.
mailto:?body=Ndị Jehova ‘Na-ajụ Ajọ Omume’%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2014524%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ndị Jehova ‘Na-ajụ Ajọ Omume’
JULAỊ 2014 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)
mailto:?body=JULAỊ 2014 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw14%26issue%3D20140715%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=JULAỊ 2014 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)